Odide Ofulday na-emepụta ihe na-ehi ụra | Rayson
Ọ na-agbasi mbọ ike mgbe niile, Rayson etolitela ịbụ onye na-achụ n'ụlọ ahịa na ndị ahịa. Anyị na-elekwasị anya n'ịdị ike nke sayensị na azụmaahịa ọrụ. Anyị edobela ngalaba ọrụ ndị ahịa ka ọ ka mma nye ndị ahịa na ọrụ ngwa ngwa gụnyere ọkwa nsuso. Oge opupu ihe ubi na-adabara akwa taa, Rayson buru elu dị ka onye na-eweta ọkachamara na nke nwere ahụmịhe na ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike imewe, mepụta, mepụta, ma ree usoro dị iche iche na nke anyị na-ejikọ mbọ niile na amamihe anyị niile. Ọzọkwa, anyị na-ahụ maka inye ndị ahịa ọrụ dịgasị iche iche maka ndị ahịa gụnyere nkwado ọrụ na ọrụ ọsọ ọsọ. May nwere ike ịchọpụtakwuo banyere akwa mmiri na ụlọ ọrụ anyị site na ozugbo site na imepụta US. Standardskpụrụ ndị a bụ ụkpụrụ GB, ụkpụrụ European, Aatcc, ASTM, na ISO.